Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 12/07/2019
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 12/07/2019
UNSG’s Special Envoy meets with local people in Myebon Township
Myebon July 11Ms. Christine Schraner Burgener and delegation met with displaced people of IDP camp in Myebon Township, Rakhine State on 11 July 2019.
Firstly, they met with the Rakhine ethnic people at the office of the leader of Kan Tha Htwet Ward in Myebon Township. During the meeting, they interviewed the people about the accommodation, food and other needs, and also gave words of encouragement to improve education, health, social and businesses. Afterwards, they met with Rakhine young women association at the office of the Myebon Township rural development department.
Next, they visited the IDP camp in Taungpaw Ward, Myebon Township, and interviewed about the conditions of accommodation, food, education and healthcare service. And they also met with women and young women at the women centre in the camp.
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မြေပုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ ပြန်လည်နေရာချထားရေးစခန်းတွင် နေထိုင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံ
မြေပုံ ဇူလိုင် ၁၁
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့၌ ရောက်ရှိနေသော ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Christine Schraner Burgener နှင့်အဖွဲ့သည် ဇူလိုင်လ ၁၁ရက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ ပြန်လည်နေရာချထားရေးစခန်းတွင် နေထိုင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ရှေးဦးစွာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် အဖွဲ့သည် မြေပုံမြို့၊ ကံသာထွက်ဝရပ်ကွက်ရှိ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၌ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ နေထိုင်စားသောက်မှု အခြေအနေများ၊ လိုအပ်ချက်များကို မေးမြန်း၍ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရေးအတွက် အားပေးစကား ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့်အဖွဲ့သည် မြေပုံမြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၌ ရခိုင်အမျိုးသမီးငယ်များအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့်အဖွဲ့သည် မြေပုံမြို့ တောင်ပေါ်ရပ်ကွက်ရှိ IDP စခန်းသို့ သွားရောက်၍ နေထိုင်စားသောက်မှု အခြေအနေများ၊ ပညာသင်ကြားနေမှုနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးနေမှုအခြေအနေများကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ ယင်းနောက် အဆိုပါ IDP စခန်းရှိ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များစင်တာ၌ အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းကလေးငယ်များအား တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။